Patrice Evra: “Ronaldo wuxuu leeyahay qaab ciyaareed sare, laakiin Messi ayaa ah kan ugu wanaagsan dunida” – Gool FM
Patrice Evra: “Ronaldo wuxuu leeyahay qaab ciyaareed sare, laakiin Messi ayaa ah kan ugu wanaagsan dunida”
(World Cup) 21 Juunyo 2018.Patrice Evra ayaa wuxuu xaqiijisay in kabtanka xulka qaranka Portugal ahna gooldhaliyaha ugu wanaagsan taariikhda kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo uu sameenayo qaab ciyaareed aad u wanaagsan, balse Lionel Messi uu yahay wali kan dunida ugu fiican.
Ronaldo ayaa wuxuu bandhig cajiib ah ka sameenayaa xulkiisa qarank Portugal kulamada heerka group-yada ee koobka aduunka 2018 ee haatan si wanaagsan kaga soconaya dalka Russia.
Messi ayaa kaga bilaawday xulkisa qaranka Argantina 2018 koobka aduunka qaab ciyaareed aan wanaagsaneen, kadib markii uu xulka Tango uu barbaro 1-1 la galay dhigiisa Iceland.
“Waxa ugu muhiim ah in Cristiano Ronaldo uu badalay qaab ciyaareedkiisa, waxaan shuratami karaa, in sameynta wax walba uu sababteedu leeyahay Ronaldo”
“Wuxuu awoodaa inuu daqiiqad kasta wax ka badalo ciyaarta, waxaa xaqiiqo ah in Cristiano uu haatan qaadanayo waqtigiisii igu fiicnaa”.
“Waxaan sheegi karaa Cristiano Ronaldo waa kan ugu fiican ilaa iyo haatan Koobka Adduunka 2018, lakiin aniga ahaan Lionel Messi mar walba wuxuu ahaan doonaa kan ugu fiican, anigana waxaan ahay kooxda Messi”.
"Arsenal waa mid kamid ah kooxaha ugu wayn adduunka " - Lucas Torreira oo hadlay
Denmark iyo Australia oo ismari waayay kulan cayaareed kamida ahaa Group C ee Cayaaraha koobka adduunka+SAWIRRO